Kung Fu tarihin’i Maitre Avoko : Vonona hampandany izay kandidan’ny HVM -
AccueilRaharaham-pirenenaKung Fu tarihin’i Maitre Avoko : Vonona hampandany izay kandidan’ny HVM
Nanatanteraka fivoriambe izay nanasany solontena iray isaka ny kaomina manerana ny Nosy ny fianakaviamben’ny Kung Fu Wisa tarihin’ny Grand Maitre Avoko Rakotoarijaona. Teny amin’ny « Temple de Pierre Mizael » Ambatomirahavavy, ny sabotsy sy alahady teo no nanatanterahana izany. “Maitres” Kung Fu sokajy zandriny miisa 1 223 no tonga nanatrika izany. Nandritra izany moa dia nisy ny fiofanana ara-teknika nomena azy ireo. Nisy koa ny fanomezana toromarika nomen’ny Grand Maitre Avoko tamin’izy ireo tamin’izany, ka tapaka tamin’izany fa vonona hampandany ny kandidan’ny HVM ny Kung Fu izay tarihan’ny Grand Maitre Avoko.
Tamin’ity fotoana ity no mbola nanamafisan’izy ireo ny ho firotsahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, filoha ankehitriny , ho kandidà ary vonona izy ireo hampandany azy. “ Tsy afa-misaraka amin’ny tantaram-pirenena mihitsy ny Kung Fu hatramin’izay. Resy lahatra izahay fa ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina no hitondra fampandrosoana sy hitondra filaminana. Izany no nangatahanay ny hirotsahany mba hanohizany izany fampandrosoana izany. Efa amin’ity 2018 ity moa ny fiatrehana an’izay fifidianana filoham-pirenena izay, ka nandinika ny fomba fiatrehana izany izahay. Vonona ny mpanao Kung Fu rehetra hiatrika ny raharaham-pirenena mba ho fitsinjovana ny mahasoa ny tanindrazana ”, araka ny fanazavan’ny Grand Maitre Avoko.
Nohamafisin’ity mpitarika ny Kung Fu Wisa ity fa ny “firaisan-kina sy ny fitiavan-tanindrazana ananan’ny Kung Fu no anisan’ny herijika novolavolaina nandritra io fotoana io, ka hampandaniana ny filoham-pirenena ankehitriny fanindroany indray”.
Hanomboka amin’io volana marsa ho avy moa ny fitetezam-paritra hatao. Tafiditra anatin’ny fankalazana ny faha-38 taona nidiran’ny Kung Fu teto Madagasikara ihany koa izany. Any amin’ny Faritra Bongolava Tsiroanomandidy no hanombohana izany , eto Antananarivo kosa ny volana Aprily, ary hitohy any amin’ny faritra hafa koa izany. Nanipy hafatra ho an’ireo mpanararaotra, ka misoloky sy mampiasa ny anaran’ny Kung Fu amin’ny tombontsoa hafa ihany koa ry zareo nandritra ity fivoriana notanterahina ny faran’ny herinandro teo ity.
Tany 500.000 amin’ny 10 tapitrisa ihany no misoratra ara-dalàna amin’ny tompony. Ho fampananana karatany ho an’ny Malagasy, nahazo fanohanana ara-bola mitentina 15 tapitrisa Dolara na manodidina ny 42 tapitrisa Ariary avy amin’ny banky iraisam-pirenena isika. ...Tohiny